Ukuxhatshazwa kwezesondo kuHormones abaxhasi bee-series-suppliers - i-AASraw powder
/ iimveliso / Ulwabelana ngesondo Ukuphucula iiHormone
Ukuxhaswa kwe-hormone yezocwangciso kubandakanya iimveliso zendalo kunye neekhemikhali. Kwinkampani yethu, sichaza nje izinto ezithile ezibonakalayo ezibonakalayo kwiimarike.
Amanqanaba amabhinqa e-estrogen, progesterone, kunye ne testosterone ngokwemvelo ziyancipha ngeminyaka ubudala, ingakumbi ngexesha nangemva kokumisa. Fumana iindlela zokugcina isondo sakho siqhubekile, nokuba ama-hormone akho aphantsi. Kwaye, kuba ngamadoda athile, kunye nobudala bexesha, isondo socansi siyahla. Kwaye, ngokukodwa, amanye amadoda aneengxaki ze-erectile i-dysfunctial problem. Ukusebenzisa amayeza okuphucula ngokwesini, bancede banandiphe ubomi, okanye ubomi bobhetele obubhetele.
I-Erectile i-dysfunction (ukungabi namandla) ukungakwazi ukufumana nokugcina iqumrhu elinesiseko elaneleyo ngokwesini.
Ukuba neengxaki zokulungisa ngexesha elifanelekileyo akusona sizathu sokukhathazeka. Ukuba i-erectile i-dysfunction iyinkxalabo eqhubekayo, kunjalo, inokubangela uxinzelelo, inokuchaphazela ukuzithemba kwakho kunye negalelo kwiinkalo zobudlelwane. Iingxaki zokufumana okanye ukugcina i-erection zingabonakalisa ukuba imeko yempilweni efuna unyango kunye nengozi yesifo senhliziyo.
Utyando luxhomekeke kwisizathu.
Ukuzivocavoca, ngokukodwa ukusetyenziswa kwe-aerobic ngexesha le-middlelife lisebenza ngokufanelekileyo ekuthinteleleni iD; ukusetyenziswa njengonyango oluphantsi kophando. Ukubhema icuba, ukuyeka ukukhokelela kubangela ukuphucuka okukhulu.
I-pharmacotherapy yomlomo kunye nezixhobo zokumisa izithuba zonyango lokuqala, zilandelwa ngamagciwane e-penis, kunye neziplani ze-penile.
I-PDE5 inhibitors i-sildenafil (i-Viagra), i-vardenafil (i-Levitra) kunye ne-tadalafil (i-Cialis) yilezi ziyobisi ezithathwa ngomlomo.
I-krimu edibanisa i-alprostadil kunye ne-enhancer permeation i-DDAIP ivunyiwe eCanada njengonyango lokuqala lwe-erectile dysfunction.
Elinye lala mayeza alandelayo angenayo injected penis: i-papaverine, i-phentolamine, ne-prostaglandin i-E1.
Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) yonyango oluqhelekileyo lwe-ED. Kukunceda ukuba ube nzima xa ixesha lilungile. Akufanele uhambe ukusuka kwi-6 ukuya phakathi kobusuku nje ngokuyithatha.
I-Talalafil / I-Cialis isicatshulwa esisebenzayo sezesondo sokusebenza ngokukhawuleza, umlinganiselo omncinci, ohlala ixesha elide.
Ngaphandle kwabo, i-Dapoxetine i-HCL ikholelwa ukuba inokunceda umntu ukuba ahlale ixesha elide ngexesha lobuchule bezocansi, xa exutywanga kunye ne-cialis okanye i-viagra.
Emva kokuthatha i-tablet enye, esinye isithako esisebenzayo seCIALIS sihlala emzimbeni wakho ngaphezu kweentsuku ze-2. Isithako esisebenzayo sinokuhlala sisinde xa unengxaki ezintso zakho okanye isibindi, okanye uthatha ezinye iyeza.
Ngaba Amanye Amachiza Ayakuthinta CIALIS?
Tshela umboneleli wakho wezempilo malunga nawo onke amayeza owathathayo, ngakumbi:
amayeza abizwa ngokuba yi "nitrate" ahlala echazwe ngenxa yentlungu yesifuba
amayeza abizwa ngokuba yi-guanylate cyclase stimulators asetyenziswa ukunyanga i-pulmonary arterial hypertension kunye neengxaki zengcinezelo ezingapheliyo
ii-alpha-blockers zihlala zichazwe kwiingxaki zeprotate
amayeza e-HIV okanye ezinye iintlobo zemithi yomlomo
ezinye iintlobo ze-antibiotics ezifana ne-clarithromycin, i-telithromycin, i-erythromycin (amagama amanqaku amaninzi akhoyo, nceda uqhagamshelane nomboneleli wakho wezempilo ukuze anqume ukuba uthatha eli liyeza)
amanye amayeza okanye unyango lwe-erectile dysfunction (ED)
I-CIALIS ibuye ithengiswe njenge-ADCIRCA kunyango lwe-pulmonary blood pressure. Musa ukuthatha zombini iCIALIS ne-ADCIRCA. Musa ukuthatha i-sildenafil citrate kunye neCIALIS.
Ukubonisa 1-8 kweziphumo 12